Soo dejisan DeepBurner 1.9.0.228 Standard, Pro... – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariGubasho CD & DVDDeepBurner
Bogga rasmiga ah: DeepBurner
DeepBurner – software si aad ugu gubto CD-yada iyo DVD-yada leh nooc kala duwan oo xog ah. Software wuxuu qorayaa cajalado badan oo kala duwan iyo wuxuu la shaqeeyaa noocyo badan oo ka mid ah CD-yada casriga iyo cajaladaha DVD-ga. DeepBurner waxay taageertaa CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, iwm. Software wuxuu bixiyaa nooca mashruuca, sida: abuuro CD ama xog DVD, abuuro CD audio, gubi image image ISO. DeepBurner wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto faylasha daaqad si aad u aragto isla markaana u sameyso qaabab faylasha kala duwan marka la duubayo. Software wuxuu sawiraa qadarka booska la heli karo oo wuxuu awood u leeyahay inuu sameeyo xuduudo dheeraad ah, habka gubashada iyo xawaaraha. DeepBurner wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto oo daabacdo daboolida noocyada kala duwan ee CD-yada ama DVD-yada.
Gubashada CD iyo DVD leh noocyo kala duwan oo xog ah
Samee CD Audio
Abuuri oo gubi sawirada ISO
Ku dheji faashado boot
Abuuri CD-yada kala duwan
Soo dejisan DeepBurner
Faallo ku saabsan DeepBurner
DeepBurner Xirfadaha la xiriira